PressReader - Isolezwe: 2019-01-14 - Kuyancomeka okwenziwe wu-Ellis noKgatlana ebholeni
Kuyancomeka okwenziwe wu-Ellis noKgatlana ebholeni
Isolezwe - 2019-01-14 - IMIBONO -
ISOUTH African Football Association (Safa) kumele ikwamukele ukuthi iBanyana Banyana iyisibani esikhanya kangcono kuneBafana Bafana. Sekuphele iminyaka iBafana yagcina ukujabulisa abathandi bebhola baseNingizimu Afrika. Ayisaphathwake indaba yokuzibekisela indawo emiqhudelwaneni emikhulu njengoba ibingekho nakwiNdebe yoMhlaba eRussia ngonyaka odlule.
Ngaleso sikhathi iBanyana iya ngokuya iqhakaza futhi lokho kuphinde kwagqama ngesikhathi kunemiklomelo yeCAF ka-2019, eSenegal, ngeledlule. Lapha kuhlabane umqeqeshi uDesiree Ellis okhethwe njengomqeqeshi obaqwaqwade bonke emakhanda e-Afrika ebholeni labesifazane.
Omunye ophakamisele phezulu ifulegi laseNingizimu Afrika ngumgadli weBanyana uThembi Kgatlana okhale wemuka nomklomelo wegoli elihambe phambili e-Afrika waphinde wathola owokuba ngumdlali oshaye into ecokeme kunabo bonke kuleli zwekazi kwabesifazane.
Bobabili u-Ellis noKgatlana babe nesandla esikhulu ekuqinisekiseni ukuthi iBanyana izibekisela indawo kwiNdebe yoMhlaba eseFrance ngoJuni. Ngaphambi kwalokho iBanyana iwine iCosafa Cup ngonyaka odlule kanti bese kungokwesibili kulandelana isidla lesi sicoco.
Mkhulu umsebenzi osuwenziwe u-Ellis kwiBanyana njengoba egcine ekhale wemuka nomklomelo womqeqeshi ovelele e-Afrika. Okuphawulekayo lapha ukuthi amaqembu amaningi esizwe esisuke sibhekene nawo aqeqeshwa ngabantu besilisa. Kumele ashayelwe elikhulu ihlombe u-Ellis ngokubhincisela nxanye amadoda okuyiwona athathwa njengalazi kangcono ibhola likanobhutshuzwayo.
Eminyakeni edlule abadlali beBanyana bebenganakwa kangakho uma kunemiklomelo yeCAF. Ayiphathwa eyokuthi kube khona imiklomelo emihle kanje ababuya nayo njengoba kwagcina noNoko Matlou ngo-2009 ukuthi awine owomdlali ovelele.
U-Ellis udinga ukwesekwa ngayo yonke indlela ngoba kuyabonakala ukuthi yini azama ukuyenza kwiBanyana. Njengamanje iqembu lesizwe labesifazane lingunombolo 2 ekuklelisweni e-Afrika kanti liyibambe kunombolo 48 emhlabeni. Lokhu yinto okungamele igcine ngokuziqhenya ngayo nje iSafa kodwa kumele ikunake ukuthi iBanyana ishaya into ecokeme kuneBafana njengamanje. Kufanele besekwe ngokuphelele abesifazane ebholeni.